Andrew Chubchenko - ifilimu kanye yaseshashalazini umlingisi, omi kancane ngaphandle nozakwabo. Kungani? Mhlawumbe wayenethemba zihlakaniphile kakhulu, ngezinye izikhathi namahloni kakhulu. Uma umlingisi ukuthi uhlobo lwakhe asifanele-movie - kungcono sina kakhulu futhi alikwazi smile. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, U-Andrew wayeziqhenya ezenzela ngendlela yakhe ukuze siphumelele, ukuze kuhlonishwe izethameli. He is osolisayo kule mkhakha, kodwa ngokuphelele ezolile nokuphila komkhaya okujabulisayo. Imininingwane Biography of the umculi e ukubuyekeza kwethu.
Andrew Chubchenko. Biography: umndeni, abazali
Andrew Chubchenko azalelwe Orenburg ngoNovemba 1967 emkhayeni abadlali. Abazali bakhe - Ezigcwalisiwe Umculi Russia. Ubaba - Alexander Efremovich Chubchenko, umama - ULyudmila Alekseevna Akinina, bobabili kule lesifunda idrama yaseshashalazini yaqanjwa Lunacharsky emzini uVladimir.
Wahlangana nenkosikazi yakhe Chubchenko Krasnoyarsk - intsha etadisha inkambo efanayo e idrama esikoleni. ULyudmila ukuba ukutadisha wahlala eliseMpumalanga Ekude, kodwa okhokho bayo owayevela eBelarus, kusukela Gomel esifundeni. Alexander Efremovich owazalwa ngo-Krasnoyarsk esifundeni, nasezinganeni ukhokho wakhe babevela e-Ukraine ngo yekhulu nesishiyagalolunye njengoba ababaleki abangemthetho. Andrew Chubchenko uthi futhi igazi Cossack ogeleza emithanjeni yakhe. Kusuka lapho, ngiya uhlobo Chubchenko nesibongo.
Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme e-abazali Krasnoyarsk Andrew Chubchenko kuhanjiswe ku Orenburg, bese - uVladimir, lapho bebehlala khona: based, baye wadala umndeni uhlala kuze kube yilolu suku. Sekuyiminyaka engaphezu engamashumi amane, baze babe nencenye emsebentini wenza umsebenzi, futhi musa ukushintsha isimo saleli lwakhe lwendabuko yaseshashalazini idrama.
Kodwa uyini ezithakazelisayo. Umlingisi Andrei Chubchenko, ogama biography manje babanjwe abalandeli abaningi cinema Russian, futhi ayikwazanga ukuhlangabezana nezethameli. Futhi abalandeli uchungechunge sethelevishini "Chef" ngabe awukaze ubabone Thixo wakhe - Viktor Rastorguev nganoma iyiphi indlela. Iqiniso ukuthi abazali Andreya njalo wathi nsizwa, ukuthi umsebenzi wabo kuyinto ebucayi kakhulu futhi ezinzima, nakuba kungase yokuzenzisa kubonakale yiziphazamiso ezihehayo futhi awanaki. Bazama ukuyekisa indodana yakhe kusukela ebuntwaneni kukhethwa indlela umlingisi sika.
Chubchenko Andrei Alexandrovich, ogama biography kwaqala ngo Orenburg, eseyingane bokuqala wachitha eKrasnoyarsk - kuze kube iminyaka emithathu ubudala Wayondliwa khona ugogo. Umlingisi kwaba umzukulu kuphela, futhi usamkhumbula uthando mad phezu ingxenye zombili abesifazane. U-Andrew uthi ukuthi ugogo ngezinye izikhathi phikisana abayobhekana Umzukulu, emvusa ngohlelo. Ngelinye isonto u-Andrei wayehlala nonina sikamama, kwesibili - eyayibhalwe ngubaba.
Ebuntwaneni Andrew sasifana ebuntwaneni izingane eziningi abadlali. Abazali iningi isikhathi esichithwa endleleni, umfana ngokuvamile washiywa ezandleni izikhungo zombuso - enkulisa wezinsuku ezinhlanu, futhi kamuva - emakamu iphayona. Yiqiniso, Wayemkhumbula abazali bakhe futhi emangalisayo happy lapho ethathwa eyophenywa ekhaya. Andrew uthi kwadingeka kusukela zisencane ukuthuthukisa uhlamvu, ngenhlanhla, iyasiza kamuva ekuphileni, futhi ukuze namuhla kulula ukuthola ulimi ezivamile nabantu. Chubchenko ezizwa kunoma iliphi iqembu.
Lo mlingisi uthi izinkumbulo zakhe zasebuntwaneni - the abanethemba iyezwakala. Nokho, inkathi Man elihlobene ne nakho ezinamandla ezingokomzwelo. Lesi sikole ku ibanga lesithupha, Andrew Chubchenko uthando unrequited kanye imizwa eyenziwa eminyakeni eminingi - babehlala inhliziyo yomuntu futhi eminyakeni yempi, futhi isikhathi esiningi kamuva. Ngokusho umculi, sibonga i engajabule kuthandana, waba yini waba. Ukuzizwa ushukumiseleka ukuba uthuthukise - futhi iduna umdlali.
Ekuqaleni, u-Andrew Chubchenko ungahleli ukuxhuma empilweni yami nge art - insizwa usuzoba ohlinzayo. Ngesinye isikhathi, ngisho ngaya wezokwelapha, kodwa kwadingeka ukuhlehlisa izifundo zakhe - Chubchenko singayiswa empini. Army ukushintsha ukubukeka insizwa izinto eziningi. Lo mlingisi evuma ukuthi kwakuyisikhathi esinzima, le ndoda kwakudingeka zidlule ezimweni eziningi ezinzima ukuthi kuphela okunye omnene uhlamvu. It akaphinda wamsiza ukuba baphule kwezempi kwezemidlalo - Chubchenko iminyaka eminingi wahlanganyela isibhakela umgijimo, ukuze angakwazi ukumelela ngokwabo. Ukukhethwa impilo yonke ibhizinisi lwenziwe lapha, futhi, kule impi, ngengozi.
Ngolunye usuku, lapho isigamu isikhathi inkonzo yezempi kwaba Chubchenko abavamile ngemuva, ngokuya ulungela ezigubha leli holidi - Suku wasemuva we lawobaba. Okuthathwa njengokumele kube yingxenye olusemthethweni, okuyinto obekumele ukufika umlawuli regimental. Amasosha ayalwa ukuba ufunde ingxenye ukubingelela, wonke umuntu umugqa. Andrew Chubchenko ngekhanda yonke etheksthini yonkhe futhi umoya ofanayo blurted congratulation, ngoba yena kamuva ukumbonga, ukhishwa elisezingeni usayitsheni. Lo mcimbi kwaba into kusukela isinqumo ukushintsha ikusasa yabo, uyisosha futhi kamuva wathi encwadini ayibhalela kuyise.
Theatre noma yini hhayi ukuhweba
Basics wokwenza umsebenzi Andrew Chubchenko wathola ngaphakathi kwezindonga Shchepkin Theatre School. Esikhathini esidlule, ngazama ukwenza kulo lonke ekolishi laseMoscow yaseshashalazini, kodwa akukho lapho, ngaphandle chips, akuzange kudlule. Futhi Pike ezingabanjwanga "ngenxa" ngokweqile ukuzethemba. Le nsizwa waxwayisa ngokuthi labafanelekako imizuliswano kufanele kusimangaze Commission. Chubchenko okulungiselelwe kuyinganekwane, ehlanganisa imizila emine. okwakhe Its abasazisi.
Ngemva kokufunda ngezinye qembu of Moscow Art Theatre yaqanjwa Gorky kwaba kumdlali Ezifuna Andrew Chubchenko. Biography zokuphila kwakhe waseshashalazini waqala lapha. Nokho, ukukhetha bayazi kunzima ukubiza, kunalokho, kwakukhona izimo. Ngemva kokuthweswa iziqu, le nsizwa baludinga kakhulu izindlu, sabhekana nobunzima nge ukubhalisa, futhi kuphela ubuholi be-Gorky eMoscow Art Theatre ayengawunikela Chubchenko ehostela nokuthi kubalulekile imfundamakhwela umlingisi, indima esemqoka kule play "Valentin futhi uValentina". Nokho, ukubhapathizwa kwakhe komlilo, umculi uxhuma ekukhiqizeni "Crazy Jourdain". Indima kule ukusebenza kwakudingeka ngifunde kwezinsuku ezimbalwa. Chubchenko otusekayo kuze kube umsebenzi kanye nozakwabo yabonisa esitolo, ukuthi uyakwazi.
Namuhla, ethiyetha, okuyinto engazange yenzeke washintsha Chubchenko sihamba ukusebenza eziningi nge iqhaza lakhe. Phakathi kwazo kunabafundi 'Izelamani ezintathu "," I edelelwa futhi elimele, "" Hamlet, "" vaudeville Russian "nabanye. By endleleni, in the play" Farewell ngoJuni "Andrew Chubchenko matasa hhayi kuphela njengoba kumdlali kodwa futhi njengoba umsizi umqondisi sika.
Uthisha wakhe labalulekile eluLwimi umsebenzi umlingisi wathi Tatiana Vasilyevna Doronin. Ngokusho umculi, actress omkhulu wamfundisa Into esemqoka - ukuqonda uhlamvu futhi uhlale kweqiniso organic ngesikhathi ukugcwaliswa esiphezulu.
Andrew Chubchenko okokuqala movie senzeka ngo-1997. Isimo sokuqala, lapho umlingisi wathatha ingxenye, ngokuthi "Kotovasiya". Ngezinye umsebenzi wokuqala ngeke kube isiyezi. Umculi ashaywa izindima elincane ewuchungechunge yethelevishini efana "Idokodo elikhishwe umphenyi Dubrovsky", "Ukubuya Mukhtar", "Blind". Ngokuvamile empilweni Chubchenko wayengomunye isiqephu ukuthi ngesikhathi kuba washaqeka kakhulu futhi ophoqelelwe sokungabaza amakhono abo siqu. Nakuba umfundi ngonyaka wokuqala chips e-umlingisi abesahlanganyela nomqondisi umsizi Mosfilm. Lo wesifazane ufuna izinhlobo ezintsha lokudubula wabona Andrew Chubchenko, sebekubeke wamtshela ukuthi yena wabonakaliswa, ngokuphelele ezingafanelanga ukusebenza ifilimu. Isizathu sokuba amazwi abo libizwa ubuso bomuntu esinzulu ntombi, nokungakwazi smile. Chubchenko usamkhumbula lesi senzakalo futhi kuyabonakala ukuthi wazibonela ngesikhathi ukucindezeleka esabekayo. Yebo, wehlukile ozakwabo esitolo, ngezinye izikhathi kubonakala ohlakaniphile kakhulu futhi zilungile. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi lapho nje eqala umculi umsebenzi, ethandwa kwakungamadodana izithombe ezigebengu futhi amaphoyisa sprightly. Chubchenko Yiqiniso, kwakungeyona efanayo kakhulu kunoma yimaphi yimuphi omunye.
Nokho, isikhathi sesifikile, futhi isiphetho umculi wanikeza ithuba lokubonisa amakhono abo. Indoda wathola ithuba inkanyezi e ifilimu Anatoliya Artamonova, "Chef" - Chubchenko akazange behluleka ukusizakala ke. Idale isithombe kumdlali ifilimu amaphoyisa uColonel ophoqelelwe ozakwethu ukubheka umculi ngendlela entsha. Ilungiselela indima, Chubchenko uzifunde ngokucophelela yonke imininingwane yomsebenzi wamaphoyisa, ukubuka izici zabantu bangempela usebenza amaphoyisa. Kodwa into eyinhloko kuka Andrey nesithakazelo Chubchenko - Biography. abadlali Russian sokulungiselela indima ngokuvamile ziphendukela imikhuba enjalo.
Namuhla Chubchenko neyaziwayo emgwaqweni bayabonga ithalente lakhe, umsebenzi kanye izithombe namaqhawe ngokwethembeka futhi nganoma iyiphi indlela. Ngo piggy yakhe izinhlamvu eziningi eziyingqayizivele - Tukhachevsky e-movie ye-serial "Saga eMoscow," futhi ngo-ifilimu "Tukhachevsky. Uzungu Marshal, "uPawulu Alliluev e ifilimu" kukaStalin Umfazi ", Ivan Lebedev kule drama ubugebengu" I wesigodlo. "
Emphilweni Andrei Chubchenko ezahlukene, ayifani esikrinini. Lo mlingisi uthi abaqaphe kakhulu futhi njalo uyazama ukugwema izimo eziyingozi, ukubala kusengaphambili ukuthuthukiswa yabo. Uyabathanda eRussia futhi ekhaya kakhulu lapho uya phesheya futhi akezwa inkulumo Russian. Nakuba umculi Ngokuba umsebenzi ngokuvamile has ukuhamba emhlabeni wonke, ukhetha ukuba baphumule lapha ekhaya inhlabathi.
Ngokuvamile umlingisi uyavuma ukuthi uthambekela ukucindezeleka futhi ezama ukuxhumana kwemizwa benethemba abantu ezimpilweni. Umlingisi ukushaja nabo amandla, ukuthola amandla ukuze siqhubekele phambili. Imizwelo ukuthi Andrew kwenzekani ngokusebenzisa isigaba, thatha amandla amaningi, futhi kabusha ngokusebenzisa amahlazo ku isethi umlingisi akazi ukuthi. Hhayi izindlela zakhe. Ayithandi ukuphula isikhala yomunye futhi kuyo abantu esimweni esiyinkinga, wakhetha ukunika bonke abantu ithuba 'ukunqoba' futhi ilungelo "ukuba phezulu."
Empilweni yakhe siqu Andrew Ukhombisa ukuqinisela enviable - iminyaka eminingi washada uzakwabo esitolo, okuyinto ndawonye kusukela ekolishi. Ngokwe-umlingisi, kuba ukubeka izinga bobuntu bakhe njengoba ingane - wabona ubuhlobo abazali, ikhono lazo unakekelane, basizane futhi uzoxazulula zonke izinkinga ndawonye. Umlingisi uthi umkakhe - Umngane wakhe omkhulu ongeke akhaphele. umlingisi Ushadile oziphilela engaphezu kweminyaka engamashumi amabili, futhi has a indodakazi esikhulile.
Ingane candidiasis: Izimpawu, Ukwelashwa
Tours e Monaco - isiqinisekiso ukuphumula okuhle
Ukuhlaziywa kwe-athikili: inqubo, ukusetshenziswa